Audi A8 ohuru na-enye ọdịnihu nke klas amara. Audi A8 ohuru na-enye ọdịnihu nke klas amara. - LFOTPP
Audi A8 ohuru na-enye ọdịnihu nke klas amara.
N'ọgbọ nke anọ, akara ngosi nke brand a na-enyeghachi aha maka Vorsprung durch Technik - ya na asụsụ ọhụrụ eji emepụta ihe, ihe ngosi na-arụ ọrụ na-emepụta ihe na-agbanwe agbanwe. Audi A8 bụkwa ụgbọala mbụ na-emepụta ngwá ọrụ na ụwa iji mepụta ụgbọala nke ukwuu. Site na 2018, Audi ga-eji nwayọọ nwayọọ na-eburu ọrụ nkedo ụgbọelu dị ka onye na-adọba ụgbọala, onye na-anya ụgbọ ala na onye na-agba ụgbọ okporo ígwè n'ime mmepụta.
A na-ewu Audi A8 ọhụrụ na A8 L na neckarsulm saịtị wee pụta na ahịa German n'oge ngwụcha nke 2017. Ọnụahịa mmalite maka A8 bụ EUR 90,600, na A8 L na-amalite na EUR 94,100.
Doyen nke Audi ụdị: mmepụta ime
Egwuregwu na-akpali mmasị, ịrụ ọrụ dị mfe na quattro - nhazi nke ọhụrụ A8 zuru oke na-enye ụkpụrụ dị mkpa nke Audi. Ọ na-eme ka ị mara mma, ịmara na ọganihu. Ụdị flagship ọhụrụ ahụ na-ewepụta ụdị ahụ n'ime oge ọhụụ ọhụrụ.
Oghere Hefragonal Singleframe na-achịkwa njedebe ihu ziri ezi nke Sedan. Ebe ọ dị ala na obosara ya, ọ na-ekpebi ebe niile na-agbakwunye. Isi oriọna na-eme ka ha jikọta n'ụzọ zuru ezu na Singleframe. Na nhọrọ HD Matrix LED ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ ụbọchị na-egosi na ndọtị nke top lamella na grille. Ihe ntinye aka nke edeputara nkewa nke na-ekewapu oku n'igwe, na -eme ka mmadu mara ya. Mkpụrụ osisi chịlịlị dị mkpa gbara gburugburu ikuku ikuku, nke nwere oghere dị larịị nke na-ejikọ ha.
Echiche dị n'akụkụ na coupe-dị ka silhouette na-eme ka ihe ngosi egwuregwu nke A8 ọhụrụ ahụ pụta ìhè. Ụdị ya na-eme ka a mara ma ụkwụ na azụ - nke a na-ahụkarị na muscular na-adị elu karịa wiil ndị ahụ dị na DNA. Ubu ubu ubu ala amalitere aka na mberede ma na-agafe onu ogugu uzo dika uzo n'azu. Ogige dị n'okpuru windo ntinye na-egosikwa ogologo. The sill na-ebute n'azụ n'azụ ụdịdị Audi ma na-eme ka A8 ọhụrụ dị ike nke kwesịrị ịnya ụgbọala.
Azụ azụ na-adabere n'ụzọ dị mfe na njem nke njem, na-apụta ịkwanye sedan tinyere ọbụna mgbe ịnọ ọdụ. Ihe mmeputara nke ihe eji egbuke egbuke na-agbasa n'ofe obosara. It radiates high intrinsic value thanks to the embedded chrome strip. OLED ndị a na-esote n'akụkụ ya na njedebe ya ma jikọta iji mepụta mbinye aka. Ihe ọzọ na-emepụta chrome nke dị n'akụkụ ala nke ọkpụkpụ ahụ na-ejikọta trapezoidal trims of the exhaust system.
Enwere nhọrọ nke agba iri na abụọ maka A8, tinyere agba ọhụrụ Audi Terra Gray, Vesuvius Gray na Seville Red. Ụdị Impala Beige na Navarra Blue dị maka A8 maka oge mbụ. Site na ngwa nke Audi nanị, ndị ahịa nwere ike ịnweta okomoko Sedan na-eme ka ha nwee nhọrọ nke onwe ha. Maka ndị chọrọ ka ụgbọ ala ha mepụta mmetụta ndị ọzọ dị egwu, enwere nhọrọ nke ngwugwu mpụga chrom.
HD Matrix LED, laser, OLED: ọkụ
Audi na-eduzi ụzọ na teknụzụ na imepụta ọkụ. Na A8 ohuru, teknụzụ na-emekọrịta ihe na gburugburu ebe obibi. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji ọkụ ọkụ Audi eji ebe a mee ihe na HD Matrix LED dị elu. A na-achọpụta ebe a na-ahụ maka laser site na ihe nkedo nke X ma kwenyekwa ya site na ọkụ na-acha anụnụ anụnụ. Mmiri na-enwu ọkụ ụbọchị na mpaghara ndị ahụ na-ahụ anya na-emesi ịdị mma nke ọkụ ọkụ ọkụ. A na-arụ ọrụ laser site na ọsọ nke 70 km / h (43.5 mph) ma mee ka ọnụọgụ dị elu dị elu.
Onye obula nke ihe omuma nke ihe omuma nke 32 di iche iche, na-acho ihe di iche iche nke light-emitting diodes. Nhazi ọhụrụ a mere ka o doo anya na A8 na-enye ọbụna ìhè dị omimi na nkenke ziri ezi na ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe. Oghere ọkụ ahụ na-ekpochapụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ, ka ha wee ghara imebi ha. Ogologo oke nkenke maka HD Matrix LED dị elu na-adabere na data dị n'ihu igwefoto.
A na-emepụta ìhè ọkụ site n'iwepụ ebe ebe ìhè dị. Ọ na-eji data ntanetị na-enwu ka ọ gbagọọ agbagọ tupu ịgbanwuo nlekọta ahụ. Nkwụnye ọkụ ahụ na-abata na-ebu amụma tupu oge eruo. Mgbanwe ihu a na-esite na ya na-abanyekwa na mpaghara atọ ruo na elu nke 90 Celsius. Na ọrụ ya niile juputara n'igosi ntụgharị ihu igwe, ihe ọ bụla na-eme ka ihe ọ bụla na-emepụta 138 LEDs na otu laser diode. Igwe ọkụ akụrụngwa ọhụrụ na-egbochi arụ ọrụ na-ekwesịghị ekwesị ma na-achịkwa site na ntinye ọkụ ọkụ ọhụrụ na ntanetị anya na touchscreen elu.
Tinyere oghere ndị dị elu, Audi na-enye OLED azụ ọkụ nke na-etinye ìhè dị ezigbo mma. Enwere OLED anọ nke na-ese n'elu mmiri na mpaghara nke ọ bụla, na-ekewa n'ime ngalaba anọ na-achịkwa n'otu n'otu. Abụọ n'akụkụ nke ọ bụla na-akpụ ọkụ ọkụ ọkụ, na ihe abụọ ndị ọzọ dị ka ọkụ ọkụ.
N'okpuru OLED a nwekwara eriri ọkụ ọkụ nke na-eme ka ìhè dị mma mgbe a na-eji brakes mee ihe. Nke a na-aga maka ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-agbanye ọkụ n'okpuru ha. E nwere 135 ọkụ-emitting diodes n'iji arụ ọrụ ọ bụla na azụ azụ.
Ihe ọkụ na-enye ọhụrụ A8 ọhụụ na-enweghị atụ na elele anya mbụ. Nke a na-adabere na ọrụ ọrụ ọkụ ọkụ. Ha na-ewetara Sedan dị okirikiri n'ụzọ dị iche iche mgbe ọ na-emeghe ya na igodo mgbagwoju anya. Nke mbụ, isi ọkụ dị na ọkụ ọkụ na-agba site n'èzí na-apụ, mgbe ahụ, na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọkụ ọkụ na ebe ọkụ laser na-enwu, n'ikpeazụ, ọkụ ndị dị n'akụkụ na-esi n'ime.
Loops abụọ nwere otu ihe omimi aesthetics na-agba ọsọ na OLED n'azụ azụ: Ìhè na-agba n'ime gburugburu, na-agbanwe na mbụ ma na-enwu gbaa. Ihe ngosi ìhè na-aga n'ihu mgbe emeghere ụzọ. Nke a na-esonyere ya na obere egwu egwu. Mgbe onye ọkwọ ụgbọala na-ekpuchi ma hapụ A8 ọhụrụ ahụ, ìhè dị na ọkụ ọkụ na ọkụ azụ na-agba ọsọ na usoro ọzọ.
Ahụhụ zuru ezu zuru ezu: imewe ime
Ọhụụ ọhụrụ n'etiti nkà na ụzụ na ihe aesthetics - ime n'ime Audi A8 na-enye ahụmahụ zuru ezu gbasara ohere. Ihe owuwu ahụ na-ejikọta ya na ihe ọhụrụ eji arụ ọrụ, bụ nke kpochapụrụ bọtịnụ na njikwa. Ebe dị ọcha ma dị elu na-eme ka ikpo ọkụ dị jụụ nke ebe ezumike dị okirikiri. Ịdị jụụ na mbelata bụ ihe ndị dị mkpa na-egosi na ị ga-enwe mmasị n'àgwà ọma nke ụdị ọkọlọtọ ọhụrụ ahụ.
N'ime nnukwu Sedan, usoro ndị ahụ na-agba ọsọ ma na-emepụta oke, nke a na-agbaso. Ha na-ekwenye na nnwere onwe nke A8 ọhụrụ na-enye ndị njem ya. Ngwa ndị dị na ihe ndị e ji eme ihe na sculptural dị na nhọrọ nke ịkpụ osisi ma ọ bụ ngwụcha piano ma mepụta ihe mkpuchi - nnukwu arc na-agafe n'azụ ụzọ na n'ime azụ. Mpaghara a na - anakwere ikuku ikuku, nke ndị na - emechi windo zoro ezo mgbe ha na - adịghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na a na-etinye ikuku oyi ikuku kpọmkwem n'ime ime, ndị na-emechi windo na-agbagha ma na-agagharị na-arụ ọrụ na ikuku ka ikuku na-agbasapụ na nkeji centimeters.
N'akụkụ dị ala nke ogwe ihe nkwekọrịta ahụ, ogwe ihe ngosi 10.1-inch nke anụ ọhịa na-arụ ọrụ na ntanetị nke igwe ojii na-ejikọta ihe na-adịghị ahụ anya n'ime nnukwu mkpịsị nwa. Dabere na akụrụngwa ahụ, ọ dị na isi awọ na-eji oji ma ọ bụ n'ọchịchịrị, nke a na-ejupụta na ya. N'elu oghere ntutu center, nke na-aga n'ihu na nyocha panel, enwere ngosi ihuenyo nke abụọ nke na-ele XSUMX sentimita asatọ. Mkpịsị aka na ala ala ya nwere ike ịgwakọta ya na ngosipụta ahụ iji chee ihu elu na-aga n'ihu. Ha na-enye onye ọrụ ahụ nzaghachi na nzaghachi dịka ọ bụ site na ngbanye igwe. Otu ihe a na-emetụkwa ìhè na njikwa na ikuku ikuku.
Dị ka nhọrọ, ìhè ọkụ abụọ na-eduzi ọ bụla na oghere dị n'etiti, ogwe aka na n'ọnụ ụzọ mepụtara ikuku ọkụ kwesịrị ekwesị n'ime ime. Ha na-emepụta uhie na mmetụ ọkụ na ìhè dị iche iche na njikwa agba dịka ụzọ mara mma iji kwalite usoro nhazi ahụ. Na A8 L, azụ nke oche nkwekọrịta nke nkasi obi na-ejikarị eriri mpempe akwụkwọ. Ngwurugwu nke Matrix LED nke mepụtara ọhụrụ na-enwu ọkụ ọ bụla na asaa LEDs nyere ìhè kachasị mma. Onye njem ahụ nwere ike ịchịkwa ìhè, nha ma na-elekwasị anya cone na-echekwa ogige ntanetị azụ.
Ezigbo na ezigbo: agba na ihe
Ime n'ime A8 ohuru a ma ama maka ihe ndi ozo. Ụfọdụ n'ime ezigbo osisi na-egbuke egbuke na-emeghe ma na-emetụ aka na aka. Maka akpụkpọ anụ ya, Audi na-ekpochasị kemịl chrome - nke kachasị elu na-emepụta ihe dị iche iche dị na ya, nwere ike ịmị ọkụ ma jiri aka ya mepụta. A na-ekpuchi isi isi nkasi obi dị nro, velvety Cocoon akpụkpọ anụ, ihe ọhụrụ nke ọkwa kachasị elu. Njikọ nke ihe ndị ahụ na ọdịdị ha na-emepụta echiche dị ọhụrụ, nke dị ugbu a nke okomoko. Ha na-egosipụta ọrụ aka ruo n'ókè kachasị mma, na-enye ha àgwà nkwpoke; otu ihe ahụ na-emetụta nkedo ahụ na-anọchi anya oche.
E nwere ihe asatọ na agba agba na A8 ohuru, na-emecha na nhọrọ imepụta Audi. Maka ihe ndị a, nhọrọ ndị ahụ bụ akwa Verdi na akpụkpọ anụrị Valetta, Valcona na Unicum. Enwere ike inye ha na agba ọhụrụ agba aja ojii, obodo ukwu na agba ntụ, dịka ọmụmaatụ. N'ihe akụrụngwa akụrụngwa, ọdịiche dị iche iche na-agbakwụnye ihe ọzọ. Tụkwasị na nke a, dabere na mbipute nke ngwaọrụ ahụ na-abata na nhazi abụọ. E nwere ihe dị iche iche dị iche iche, sitere na beech na eucalyptus na wolf wolf na obere piano. N'ikpeazụ, ndị na-achọ ịkwalite A8 ha na-achọ nhụcha onwe ha ga-achọta nchịkọta sara mbara nke ihe mkpuchi, akwa, ihe na akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na mkpịsị aka na usoro Audi nanị.
Ọbụna ịrụ ọrụ nke ọma: engines na nkà na ụzụ MHEV
N'okwu ahịa ya na Europe, Audi A8 ọhụrụ ga-amalite na V6 turbo engines, nke 3.0 TDI na-ejikarị 210 kW (286 hp) na 3.0 TFSI na 250 kW (340 hp). Ụdị V8 abụọ ahụ ga-eso: 4.0 TDI amalite 320 kW (435 hp), 4.0 TFSI nwere mmepụta ike nke 338 kW (460 hp). Ọzọ gosipụtara na nke a bụ W12 maka A8 L, na-emepe 430 kW (585 hp). All engines na-enye mmelite kachasị elu, ịrụ ọrụ zuru oke na arụmọrụ dị elu. Ngwá ọrụ dị ọhụrụ ngwakọ ngwakọ (MHEV, ụgbọ ala eletriki dị nro) na - eme ka mmanụ ụgbọala dịkwuo n'ihu - dị ka 0.7 lita (0.3 US gal) nke mmanụ ụgbọ ala maka 100 kilomita (62.1 mi) na ọnọdụ ụgbọ ala n'ezie. Ihe ntinye nke ntinye gasoline ga-eso 2018.
Igwe sayensi Audi si MHEV dabeere n'usoro eletriki nke mbụ 48-volt nke ọhụrụ - ọ na-enye usoro 12-Volt nke na-aghọzi usoro ihe ọkụ ọkụ. Usoro 48-volt na-eji belt alternator Starter (BAS) jikọọ na crankshaft engine site belt ụgbọala. Batrị lithium-ion etinye na-enweghị ihe ọ bụla n'okpuru oghere ụlọ ahụ dịka nchekwa nchekwa.
Ọkwọ ụgbọala ọhụrụ na-ejikọta arụmọrụ na nkasi obi n'ụzọ dịpụrụ iche: N'ihi nnukwu voltaji, A8 ọhụrụ nwere ike ịgafe na mbara igwe site na 55 site na 160 km / h (34.2 site na 99.4 mph). Mgbe ahụ, ụgbọ ala ahụ na-enweta ihe ọkụkụ na-efu ruo na 40 sekọnd na engine ahụ kpamkpam. Ozugbo onye na-akwọ ụgbọala na-agagharị na gas ahụ ọzọ, belt alternator starter prompts a swift but soft reboot. Na mgbakwunye, mmalite / kwụsị ọrụ na-arụ ọrụ site na 22 km / h (13.7 mph). Mgbe a na-eji ntụchi ahụ eme ihe, BAS nwere ike ịlaghachi na 12 kW nke ike, na-enyere aka belata mmanụ ọkụ.
Ike na spontaneity: 3.0 TDI na 3.0 TFSI
Ma ma ọ bụ V6 engines bụ ọgbara ọhụrụ. 3.0 TDI amalite 210 kW (286 hp) site na ngbanwe nke 2,995 cm³. Emeela ọtụtụ ebe ọtụtụ ebe, dị ka njikwa ya nke ọma. Na 600 Nm (442.5 lb-ft) nke ibe na gafee ntụgharị site na 1,250 ruo 3,250 rpm, ọ na-ebuli traction dị elu. 3.0 TFSI na ngbanwe nke 2,967 cm³ na-emepụta 250 kW (340 hp) ma mekwaa ọnụ ọgụgụ kasị elu nke 500 Nm (368.8 lb-ft) nke dị ala na ntaneti, n'etiti 1,370 na 4,500 rpm. Nkwụsị ya nke na-agwụ agwụ dị n'ime elekere 90, n'ihi ya, ụzọ ụzọ gas na-agagharị na chaja na-ejiri ihe na-eme ka ịzaghachi. Ụdị njedebe ya na-eme ka engine engine V6 rụọ ọrụ nke ọma. Iji kwado ya, usoro Audi valvary (AVS) na-edozi valve oriri na-emeghe oge na ọrịa strok na nkebi abụọ na-adabere na mkpa.
Ọrụ na omenala: 4.0 TDI na 4.0 TFSI
Ọbụna arụmọrụ dị na kpatụ na bọmbụ abụọ, liter asatọ cylinder nke ga-eso 2018 - 4.0 TDI na 320 kW (435 hp) na 4.0 TFSI na 338 kW (460 hp). Ha na-ekekọrịta ụkpụrụ nkà na ụzụ isi, dịka nkà na ụzụ biturbo na usoro Audi valvelisation (AVS). Mgbe ọkọlọtọ gasoline na-ejide onwe ya, AVS na-ehichapụ 2 3, 5 na 8 na-emechi site na imechi valves ha na ikpochapu. Nke a na-ebelata ikuku oriri ma na-akwalite arụmọrụ. Na diesel, AVS na-arụ ọrụ otu valvụ na-ekpochapu na cylinder. Ya mere ọ na-ejikwa abụọ turbochargers, nke - n'adịghị ka TFSI - na-agbanwe oge. Maka nsị zuru oke nke ime ụlọ ọkụ ahụ, enwerekwa otu AVS na TDI.
N'okpuru ọrụ, 4.0 TFSI na-emepụta ụda egwuregwu a na-ahụkarị bụ nke zuru oke na-enweghị ihe ọ bụla. Na V8 gasoline engine, e-tron na W12, Ntugharị Nchịkwa Ọrụ (ANC) na-ekpochapụ ndị a. Usoro ahụ na-eziga mkpọtụ nke mkpọtụ na nkwupụta ụda olu. Tụkwasị na nke ahụ, V8, W12 na 3.0 TDI na-eji ígwè ọrụ ígwè arụ ọrụ nke na-egbochi nnyefe nke ụzụ nke ahụ. Ha onwe ha kwa, na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe - a na-ahọrọ mmetụta ha karịsịa ka ha na-agba.
Ntughari nke kachasị oke: W12
W12 ga-agbaso na 2018 na Audi A8 L ọhụrụ dị ka nsụgharị engine nke kachasị mma, nke kachasị mma. Site na ejima ya abụọ turbochargers, ọ na-amalite 430 kW (585 hp) site na ngbanwe nke 5,950 cm3. 800 Nm (590.0 lb-ft) nke di na nwunye na-adị mgbe nile n'etiti 1,300 na 5,000 rpm. Dị ka 4.0 TFSI, ígwè iri na abụọ ahụ na-arụ ọrụ nkà na ụzụ COD (cylinder on demand). N'ebe dị ala ma na-agba ọsọ engine, ọ na-emechi aka ụlọ ahịa cylinder n'aka ekpe iji belata mmanụ ọkụ.
Nkasi obi ma kwụsie ike: ike nnyefe
Egwuregwu niile dị na A8 na-enyefe aka ha ka ha nwee ike ịmepụta nkeji asatọ. Ọ bụghị naanị na ọ na-agbanwe ngwa ngwa ngwa ngwa na nke ọma; ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Otu torsion damper (RTD) nke rpm na-eme mgbanwe nke na-eme ka a na-agbanye ọkụ na-eme ka ọ ghara ịdị na-arụ ọrụ na engine. Nke a na-ekwe ka onye na-anya ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ nke ọma site na ọsọ ọsọ engine dị oke dịka 1,000 revolutions kwa nkeji.
Ọdịdị tiptronic dị mma ugbu a bụ oge mbụ a kwadebere na mgbapụta mmanụ eletrik - a na-arụ ọrụ ọ bụla mgbe nnukwu sedan na-agagharị na igwe. Ozugbo A8 ọhụrụ na-aga n'ụsọ oké osimiri na engine ya ma ọ bụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-ejigide, njide aka na etiti etiti dị iche iche na-agbapụ iji kwụsị ọrụ ike. Maka ịmepụta ngwa ngwa n'ike ike, karịsịa mgbe ị na-agagharị na engine arụghachitere ya, ndị injinia na mmekọrịta ya na ZF mejupụtara mgbagwoju anya ejiri mee ihe na usoro nhazi.
Njikwa nnyefe nke ọhụrụ A8 nwere ike maka oge mbụ ịmara njedebe & gaa ọnọdụ. Ugbu a, ọ na-eme ka usoro ịkwọ ụgbọala gbanwee n'ụzọ dị mkpa na nkasi obi; dịka ọmụmaatụ, ọ na-ezere ihe ndị na-adịghị mkpa ma ọ bụ na-amalite na nke abụọ. Onye ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ike ikwe ka nnyefe akpaka na-arụ ọrụ na-akpaghị aka na ụdị E, D na S, ma ọ bụ nwee ike ijide ịchịkwa ya na ọnọdụ M. A na-ebunye ndị na-ahọrọ ndị na-ahọrọ ihe niile electrically.
ugbo ugbua nile na-agba chaa chaa ọ bụla dị na ọkọlọtọ Audi ọhụrụ. Na ọnọdụ ụgbọ oloko nkịtị, ụlọ na-ekpochi onwe ya dị iche iche na-ekesa ọgbụgba n'etiti n'azụ na azụ axle na nsonye 40: 60. Ọ bụrụ na ọpụpụ na-apụta na otu axle, ọ na-eduga ruo 70 pasent nke ọgba ọsọ ụgbọala na ihu ma ruo 85 pasent na azụ. Iji aka na-enye aka site na wiil-nchịkwa nhọrọ mgbe ọ bụla a na-eji ụgbọala ịkwọ ụgbọala. Igwe ihe ọmụma nwere ọgụgụ isi na-agbaji wiil abụọ ahụ n'ime a gbagọrọ agbagọ tupu ha amalite ịkpụgharị.
Ahịa nwekwara ike ịhọrọ ụdị egwuregwu dị iche iche na njikọta V6 na V8 dịka W12. Mgbe ị na-enye ụzụ nke ọma, nke a na-agbagha mpi n'etiti n'azụ ụkwụ dị ka achọrọ - ịkwalite traction, nkwụsi ike na ike. Onye na-akwọ ụgbọ ahụ nwere ike ịlele ngosipụta nke pasent ụgbọala nke ọ bụla na wiilị na MMI nke ọhụrụ A8. N'iji ya tụnyere ihe nlereanya gara aga, egwuregwu dị iche iche nwere ihe dịka kilogram (2.2 lb) na-enye ọbụna ngwa ngwa ngwa ngwa. Nchịkọta ya na-eji ọgbọ ọhụrụ nke nkwụsịtụ eletrik (ESP) ma tinye ya n'ime usoro nhazi usoro Audi. Nke a na-enye ohere ka onye ọkwọ ụgbọ ahụ nweta nhazi nke chassis na otu ụgbọ ala. Ụkpụrụ arụ ọrụ nke sistemụ ndị ahụ nwere ike ịhazi site na iji nkasi obi, akpaaka, ike, arụmọrụ na ụdị onye ọ bụla.
Na 2018, a ga-ebute ihe ntanetị ihe ntanye maka ụfọdụ ahịa. Ọ na-ekpebi ọkwa dị n'ime ikuku nke ikuku ma jiri ya tụnyere ikuku n'ime A8. A na-egosipụta nhazi arụmọrụ na nlekota onyonyo - ọrụ dị mkpa karịsịa maka ndị ahịa n'obodo ndị mepere emepe.
Igwe onodu ikuku nke ikuku na-achoputa gas ndi na aru ojoo ma mee ka onodu ikuku di ka odi mkpa. Ntucha na ikuku oyi na-ekpo ọkụ na-ekpochapụ ọtụtụ gas na ihe ndị a, ma na-etinyekwa ọtụtụ ọrịa allergens.
Pịa ma zụta Ngwa Audi A8 ma ọ bụ ndị ọzọ Ngwa ngwa ngwa